साग कराँतेमा कसरी कायापलट गर्‍यो नेपालले ? – देशसञ्चार
साग कराँतेमा कसरी कायापलट गर्‍यो नेपालले ?
सञ्चार संवाददाता मंसिर १६, २०७६
१३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत कराँतेको पहिलो दिन सोमबार ९ वटा स्वर्ण विजेताको टुंगो लाग्यो। ९ वटै स्पर्धामा नेपाल फाइनल पुग्यो, तीमध्ये ७ वटामा स्वर्ण जित्यो।
प्रतिस्पर्धा भएका स्पर्धामध्ये ४ वटा काता र ५ वटा कुमुते थिए। महिला एकल कातामा चन्चला दनुवार र कुमुतेको पुरुष ८४ केजी तौल मुनि दिवश श्रेष्ठ मात्र स्वर्ण पदक जित्‍नबाट चुके।
पुरुष एकल कातामा मन्डेकाजी श्रेष्ठ र पुरुष टिमकातामा मन्डेकाजीसहित महसुस तामाङ र प्रवीन मानन्धरको टोलीले स्वर्ण जित्यो। महिला टिम कातामा नेपालका निर्मला तामाङ, संगीता मगर र सरु कार्कीको टोलीले नेपाललाई स्वर्ण दिलायो। महिला एकल कातामा नेपालकी चन्चला दनुवार रजतमा सिमित भइन्। उनलाई पाकिस्तानी खेलाडीले फाइनलमा हराएकी थिइन्।
महिला कुमुतेको ४५ केजीभन्दा कम तौल समूहमा नेपालकी कुसुम खड्काले स्वर्ण जितिन्। पुरुष कुमुते ८४ केजीभन्दा माथीको तौल समूहमा नेपालका विप्लव लाल श्रेष्ठले स्वर्ण हात पारे।
पुरुष कुमुतेकै ५५ केजी तौल समूहमा नेपालका लक्ष्मण तामाङ फाइनलमा बंगलादेशी खेलाडीलाई हराएर स्वर्ण जित्न सफल भए। र महिला कुमुतेमा नेपालकी अनु अधिकारीले पनि नेपाललाई स्वर्ण दिलाइन्।
पहिलो दिन प्रतिस्पर्धा भएका ८ स्पर्धामा केवल ४ देशको सहभागिता रहेको थियो। महिला एकल कातामा मात्र ५ देशले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। भारत यसपटक कराँतेमा सहभागी छैन। मालदिभ्स हालसम्म कराँतेमा भाग नै लिएको छैन।
भुटानका चार जना खेलाडि मात्र यसपटक कराँतेमा सहभागी छन्। सोमबार एउटा स्पर्धामा मात्र भुटानी खेलाडीले भाग लिएका थिए। अर्थात सोमबार कुमुतेतर्फ दुई खेल जित्दा स्वर्ण पदक हात पर्ने अवस्था थियो।
अनु अधिकारीले सेमिफाइनलमा बंगलादेश र फाइनलमा श्रीलंकाका खेलाडीलाई नकआउट गरिन्। विप्लवले सेमिफाइनलमा बंगलादेशका खेलाडीलाई नकआउट गरेका थिए भने फाइनलमा पाकिस्तानका खेलाडीलाई हराएका थिए।
कुसुमले सेमिफाइनलमा श्रीलंका र फाइनलमा बंगलादेशकी खेलाडिलाई पराजित गरिन्। लक्ष्मण तामाङले सेमिफाइनलमा श्रीलंकाका खेलाडीलाई हराएका थिए। महिला टिम कातामा नेपालले फाइनलमा पाकिस्तान र पुरुष टिम कातामा नेपालले फाइनलमा श्रीलंकालाई हराएको थियो।
नेपालले स्वर्ण पदक गुमाएका दुवै फाइनलमा पाकिस्तानी खेलाडिसँग हार ब्यहोरेको थियो। १२औँ सागमा कराँतेलाई समावेश गरिएको थिएन। ११ औँ सागमा नेपालले करातेमा तीन स्वर्ण र २ रजत पदक हात पारेको थियो।
यसपटक नेपाललाई कराँतेमा पदक दिलाएका मध्ये अनु ११ औँ सागकी रजत पदक विजेता हुन्। कराँतेलाई आठौँ सागमा पहिलो पटक समावेश गरिएको थियो। त्यतिबेला नेपालले कराँतेमा १४ स्वर्ण पदक जितेको थियो। त्यसयता सागमा नेपालले एकै संस्करणमा सबैभन्दा बढी स्वर्ण जितेको हो।
कराँतेमा अब १० स्वर्ण विजेताको टुंगो लाग्‍न बाँकी छ। ती खेलहरु मंगलबार र बुधबार हुँदैछन्।